Featured – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
အတက်ရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး (၂)
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ တောင်ပိုင်းဘုရင်မပြည်နယ်တက္ကသိုလ်(USQ)မှ နောက်ဆုံးနှစ်ဆေးကျောင်းသားတွေကို အတက်ရောဂါမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ စိတ်ရောဂါတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ “ ဦးနှောက်နားထင်ပိုင်း အတက်ရောဂါ” (Temporal Lobe Epilepsy)(TLE)ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို...
အင်ပြင်ထွက်ခြင်း (Allergy – Urticaria – Hives)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်စပြီး အသားအရေယားယံတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါတယ်။ ယားလို့ ကုတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း (Allergic) တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ အညွှန်းအတိုင်း Lergi (Cetrizine 10mg)...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— အခုခေတ်က ကလေးတွေ ဂိမ်းအရမ်းဆော့ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆော့နေကြတာ များပါတယ်။ ဒီလိုဆော့တာဟာ တကယ်တော့ တစ်ရက်ကို တစ်နာရီလောက်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိ ဖြစ်နေတာက အ၀လွန်ရောဂါဖြစ်စေဖို့...
စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် အသုံးများခြင်းကြောင့် လည်ပင်းကြွက်သား ဒဏ်ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးဆပိုများ
———၊ ကိုထက် ၊——— တက်ဘလက်၊ iPad နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေသုံးတာက ကွန်ပျူတာသုံးတာထက် လည်ပင်းကြွက်သားမှာ ဒဏ်သက်ရောက်နိုင်ခြေ သုံးဆပိုများကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခါးနောက်ကျောနာကျင်မှုနဲ့ တခြားကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေများကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတိပေးထားပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို ၆၀...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါသမားတွေက မနက်တိုင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာဖို့ လိုပါသလား ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေဟာ မနက်တိုင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာဖို့ လိုသလားဆိုတော့ တိုင်းနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. အသည်းကြီးတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ဘယ်လိုကုသမှု ခံယူသင့်ပါသလဲ။ A. အသည်းကြီးတာက အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အနေနဲ့ အရက်သောက်တဲ့သူတွေမှာ Alcoholic Hepatitis လို့ခေါ်တဲ့ အရက်ကြောင့် အသည်းကြီးတာ...